चीन शासकहरु कारखाना र निर्माताहरु एसजेजे
तपाइँको ग्राहकहरु को लागी एक व्यावहारिक उपहार पाउन को लागी समस्या छ? निजीकृत शासकहरु सही उपहार जो उनीहरु दैनिक जीवन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाइँको ग्राहकहरु लाई एक व्यावहारिक उपहार पाउन को लागी समस्या छ? निजीकृत शासकहरु सही उपहार जो उनीहरु दैनिक जीवन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुन्दर चमकदार आपूर्ति बिभिन्न स्कूल स्टेशनरीहरु, कार्यालय स्टेशनरी सहित शासकहरु। शासक टिकाऊ, भरपर्दो छ। दुबै इन्च र सेन्टिमिटर मा सही छापिएको डिजाइन संग, यो तपाइँ को लागी प्रयोग को लागी तराजू मध्ये एक छनौट गर्न को लागी उपयोगी छ र दैनिक उपयोग को मागहरु लाई खडा हुनेछ।
हामी काठ, प्लास्टिक र प्रदान गर्दछौं सिलिकन शासकहरुविभिन्न रंगहरु मा, त्यसैले तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड बृद्धि गर्न को लागी सबैभन्दा उपयुक्त शासक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ! यदि तपाइँ केहि अधिक व्यक्तिगत, विशेष चाहानुहुन्छ वा तपाइँ अद्वितीय शासकहरु किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई तपाइँको अनुरोध संग सन्देश पठाउन को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
सामाग्री: पीवीसी, सिलिकॉन, पीपी, ABS, ABS+AS, पीईटी, धातु, काठ आदि।
दुबै इन्च र सेन्टिमिटर मा मुद्रित, तपाइँको सुविधाजनक मापन को लागी स्पष्ट अंक
एक राम्रो चिकनी सतह मापन उपकरण, तपाइँ एक राम्रो प्रयोग अनुभव दिनुहोस्
वाइड अनुप्रयोगहरु, घर, कार्यालय को उपयोग को लागी उपयुक्त, विशेष गरी स्कूल विद्यार्थी र शिक्षकहरु को लागी
प्रतिस्पर्धी मूल्य, नि: शुल्क नमूनाहरु, नि: शुल्क कलाकृति डिजाइन
अर्को: नोटबुक र स्टिकी नोट्स
कस्टम मुद्रित शासकहरु